'सुनको मूल्य अझै बढ्छ' मोहन सुनुवार, अध्यक्ष- नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ
जनतापाटी बिहिवार, असार ११, २०७७, ०९:५३:०० मा प्रकाशित
सुनको मूल्य तीब्र गतिमा बढिरहनुको कारण के हो ?
मुख्य कारण त कोरोना नै हो । कोरोनाको कारण अरु क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु सुनमा आकर्षित भए । स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले शेयर, डलर वा अन्य क्षेत्रलाई भन्दा सुनमा गरिने लगानीलाई बढी सुरक्षित माने र उनीहरुले धमाधम सुनमा लगानी गरे, गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय सुनको मूल्य बढिरहेको छ ।
अरु क्षेत्रको लगानी असुरक्षित, सुनमा गरिने लगानी सुरक्षित हुने भएकोले महंगी बढेको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, वास्तविक कारण नै त्यही हो । कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरमै लकडाउन भयो । सबै किसिमका कारोवारहरु ठप्प भए । शेयरमा गरिएको लगानी असुरक्षित भयो, धेरै मान्छे डुबे । डलरमा पनि त्यस्तै भयो । तर, सुनमा गरिएको लगानी त्यस्तो भएन, सुरक्षित रह्यो । त्यसले गर्दा विश्वभर नै सुनको मूल्य बढ्यो । त्यसको असर स्वरुप नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य बढ्यो, बढिरहेको छ ।
मूल्य बढ्ने क्रम कहिलेसम्म चलिरहला, केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?
यसै भन्न सकिदैन । लक डाउन शुरु हुनु अगाडि चैत्र १० गते ७७ हजार थियो । असार १० गते ९१ हजार १०० पुगेको छ । अहिलेकै अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा केही दिनभित्रमा १ लाख रुपैंया नाघ्ने देखिन्छ । त्यहां भन्दा माथि कहां पुग्छ भन्न सकिदैन ।
सुनको मूल्य बढेपछि नेपाली व्यवसायीहरुले त्यसबाट कत्तिको फाइदा लिइरहेका छन् ?
फाइदा लिने त कुरै भएन । लक डाउनको कारण व्यवसाय नै संकटमा परेको थियो । त्यसमाथि निरन्तरको मूल्य वृद्धिले नेपाली उपभोक्ताले सुन किन्ने क्रम लगभग बन्द भएको छ । अहिले नेपालमा सुनको कारोवार नै छैन भने पनि हुन्छ । कारोवार ठप्प छ, तर सुन व्यवसायीले चुक्ता गर्नु पर्ने दायित्वहरु बढेको बढयै छ । घर भाडा बढिरहेको छ, वैंकको किस्ता रकम पनि बढिरहेको छ , करका दरहरु बढेको बढ्यै छन् । हामीले बजेट मार्फत राहत उपलब्ध गराइयोस भनेर सरकारसंग माग गर्यौं, उल्टो प्रति ग्राम २ हजार (प्रति तोला २३३२) रुपैंयाको दरले कर बढाइयो । सरकारले पहिले सिटामोट किनौं अनि तपाईहरुलाई विचार गरौंला भन्दैछ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना र स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित विषयहरुमा केन्द्रित भैरहेको छ । तर, विचार गर्ने भन्दा भन्दै व्यवसायीहरु टिक्न नसकेर पलायन हुने अवस्था सृजना भैसकेको छ ।
सुन बढी खपत हुने तीज लगायतका चाडपर्वहरु आउंदैछन्, त्यसले केही राहत देला नी ?
त्यसको कुनै संभावना छैन । किनकी अहिले सुनको मूल्य बढ्नु वा सुन व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्था आउनुमा सिजनको कारण होइन । विवाह, व्रतवन्धको सिजन त थियो । तर, कारोवार नै ठप्प भएपछि व्यवसायी कसरी टिक्ने, सुन व्यवसायमा आश्रीत करिब ३ लाख जनशक्ति कहां जाने ? के गर्ने ? अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न नै यही हो । सरकारलाई लौ न केही गरौं, सुन व्यवसायीहरु टिक्नै नसक्ने अवस्था आयो भन्दा पहिले सिटामोल किनौं, अनि तपाईहरुलाई केही गरौंला भन्छ । के भन्ने ? अवस्था निकै गंभिर बनेको छ ।
ब्रेक्जिटमा ढिलाई भएको भन्दै बेलायती प्रधानमन्त्रीले जनतासँग मागे माफी आइतवार, कार्तिक १७, २०७६, २२:०७:००
मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वास्थ्य सुधार हुँदै मंगलवार, आश्विन २, २०७५, १३:१२:००
मुम्बईमा घर भत्किदा १४ जनाको मृत्यु बुधवार, श्रावण १, २०७६, १२:४१:००